ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: အောင်မြင်မှုကို သက်မဲ့ပစ္စည်းများနဲ့ မတိုင်းတာပါနဲ့
ကိုယ်စီးနေတဲ့ ကားအမျိုးအစား၊ ကိုယ်နေတဲ့ အိမ် ဘယ်လောက်ကျယ်သလဲ ဆိုတဲ့ ပမာဏ အတိုင်းအတာ ၊ကိုယ် ရင်းနှီးစုဆောင်းထားတဲ့ ငွေမမာဏတွေ တိုးပွားမှု စတာတွေကြောင့် ကိုယ်ဟာ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက် ဒါမှ မဟုတ် ဆိုးတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး. . . ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘာအရေးပါသလဲ ဆိုတာကို သတိ မမေ့ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်. .
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါနေရတဲ့နေ့ဟာ ဒီနေ့ နောက်ဆုံးနေ့ပဲ ဆိုပြီး ခဏလောက်တွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါ . . . . ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ အတွက် ငါ ဘာတွေ ပြီးမြောက် အောင်မြင်ခဲ့ရပြီလဲ. . . ငါ့မှာ ဂုဏ်ယူစရာ ဘာတွေ ရှိပြီလဲ . . ငါ့ကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုပေးတာတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာကို စာရင်းလေးတစ်ခု ချက်ချင်းပဲ ချရေးကြည့်လိုက်ပါ. . .
အဲဒီ စာရင်းထဲမှာ ကိုယ့်ကား ၊ ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ တယ်လီဗီးရှင်း ၊ ကက်ဆက်၊ ကိုယ်ရနေတဲ့ လစာ ၊ ၀င်ငွေ တွေ ဘယ်ပါပါ လိမ့်မလဲ. . . အဲဒီ စာရင်းထဲမှာ ကိုယ့်ဘ၀ကို စိတ်ချမ်းမြေ့ ပေးမယ့် အခြေခံ အချက်တွေပဲ ပါမှာပါ. . . ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့် အသိမိတ်ဆွေတွေ ၊ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုတွေရဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေး ၊ သူများတွေ အတွက်ကိုယ် ဘာတွေ လုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီလဲ စတဲ့ ကိုယ့် ဘ၀မှာ ပျော်ရွင်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေပဲ ပါမှာပါ. . . ဒါတွေဟာ ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ် စာရင်းသွင်းရမယ့် မှတ်တိုင်တွေပါ.
အများစု ဟာ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ကိုယ်နေရတဲ့ ဘ၀မှာ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတာတွေသာ မှန်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆတတ်ကြတယ်. . . .ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ်အစစ်အမှန် တန်ဖိုးထားရမယ့် အရာ၊ ကိုယ် တကယ်ပဲ ဦးစားပေးရမယ့် အရာတွေ အစား ကိုယ်က အောင်မြင်မှုရယ်လို့ မှတ်ယူတိုင်းတာထားတဲ့ အရာတွေ၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ တိုးပွားဖို့ကိုပဲ စုဆောင်းနေတတ်ကြတယ်. . . . သည်လိုနဲ့ အောင်မြင်မှု အစစ်အမှန်ဟာ ဘာလည်း ဆိုတာကို ပြန်ပြီး မဆန်းစစ်မိကြတော့ပါဘူး. . .
မိတ်ဆွေတွေ ၊ မိသားစုတွေ စတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် သူတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေသူတွေဟာ ဥစ္စာပစ္စည်း တွေ ချည်းသက်သက် ပြည့်စုံ့နေသူတွေထက် စိတ်ချမ်းသာမှု ကိုးဆလောက် ပိုမိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်. .
ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ အောင်မြင်မှုကို သက်မဲ့ ပစ္စည်းများနဲ့ မတိုင်းတာ ကြပါနဲ့ လို့. . . .
ရေးသားသူ poemflower at Friday, June 04, 2010
သဒ္ဓါလှိုင်း June 4, 2010 at 3:55 PM
kokomaung.uk June 4, 2010 at 4:08 PM
ဟုတ်တယ်။ အောင်မြင်မှုကို သက်မဲ့ပစ္စည်းသက်သက်နဲ့ တိုင်းတာဖို့ ခက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့် အဲဒီလိုဘဲ တိုင်းတာနေကြတယ်။ တစ်စိပ်တစ်ဒေသတော့ မှန်ကောင်းမှန်နိုင်တာပေါ့လေ။
ဒါပေမဲ့ အားလုံးတော့ ပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
zox.netmaze June 4, 2010 at 8:49 PM
သိပ်မှန်တယ်ဗျာ။ အဲဒီ စကားတွေကို လူတိုင်းလိုလို သိဖို့ တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဗျ။ ဘာမဟုတ်တာတွေနဲ့ လူတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဟုတ်လှပြီ ထင်နေတာ။ အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ များများ တင်ပေးပါ အစ်မ၊ ညီမ တို့ရေ။
what is good things June 5, 2010 at 2:48 PM
အမှန်ပဲညီမရေ..။ ပစ္စည်းဥစ္စာထက် စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲ အဓိကထားရမယ်။
ညီညီထွေး June 5, 2010 at 7:30 PM
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ... မှန်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် လူ့အတ္တအရတော့ ဆက်ပြီးတော့ ပစ္စည်းနဲ့ တိုင်းနေကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ....
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) June 5, 2010 at 9:12 PM
သေရင်ထားခဲ့ရမဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘဲ တပ်မက်နေကြတုန်းပါ..
အောင်မြင်မှုဟာ တကယ်တမ်းတော့ မက်မောစရာ မရှိလှပါဘူး...
sosegado June 7, 2010 at 5:32 PM
ဒါပေမဲ့ အပြန်အလှန်လိုအပ်တယ်လေ၊ ရှိမှချမ်းသာတာတဲ့၊